admin, Author at Myanmar Youth and Student Association
MYSA COIVD support event 2020
20 Sep, 2020 in Donation by admin
2020/09/20 မြန်မာသံရုံး (တိုကျို) မှ သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်သူနှင့်တကွ အခြားတာဝန်ရှိ သံရုံး အဖွဲ့ဝင်များမှ ဦးစီးကျင်းပပေးသော ဂျပန်ရောက် မြန်မာကျောင်းသူ/သား များအား ပညာသင်ကြားမှု အထောက်အကူပြု လှူဒါန်းငွေ ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို MYSA အဖွဲ့သားများ သွားရောက်ပူးပေါင်းကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ MYSA အဖွဲ့ဝင်များမှ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသော ကျောင်းသား/သူများကို အဖျားတိုင်းခြင်း၊ အရက်ပြန်ဖြင့်လက်ဆေးခြင်းများနှင့်အတူ အခြားလိုအပ်သည်များကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစီအစဥ်အတိုင်း သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်သူမှ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျောင်းသား/သူ တစ်ဦးချင်းစီအား ထောက်ပံ့ငွေများ (တစ်ဦးလျှင် ယန်း-၁၀သောင်းစီ) ကို ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားမတက်ရောက်နိုင်သော နယ်ဝေးမှကျောင်းသား/သူများကိုယ်စား MYSA မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ကိုယ်စားပြု၍ တက်ရောက်ယူပေးခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသော ကျောင်းသား/သူ များမှ သံအမတ်ကြီးနှင့်တကွ […]
MYSA Kansai Activity
11 Sep, 2020 in MYSA Trip by admin
2020/1/23 MYSA Kansai Activity⛷ 🏂အိုဆာကာ မြန်မာလူငယ်ကျောင်းသားများအသင်းအဖွဲ့ (MYSA-Kansai) မှ ဖေဖဝါရီ ၂၂နဲ့ ၂၃ ရက်နေ့ Ski ခရီးစဉ် ကို မှတ်တမ်းတင်ပါသည် 👏🏻ပါဝင်ပေးတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများကို MYSA-kansai မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပြပါသည်
Asean Sports Festival 2020
11 Sep, 2020 in ASEAN / Asean Sports Festival by admin
2020/1/19 Asean Sports Festival 2020 Congratulation Myanmar 🇲🇲 Gold medal for Futsal 🥇 Bronze medal for Badminton 🥉 Bornze medal for Table Tennis 🥉 We did it together with passion and united. Thanks our players for the amazing results. Futsal မှာ ဒီနှစ်လဲမနှစ်ကချန်ပီယံဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Badminton team ကလဲ ကြေးဆုနဲ့ တတိယနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Table Tennis မှာလဲ […]
One of MYSA Activities in Tokyo, Japan
11 Sep, 2020 in General by admin
ရဲအိဝခေတ်ဂျပန် ဧကရာဇ် နာရူဟီတို ( Rei Wa Japan Emperor Naruhito ) နန်းတက်ပြည်သူများမှ ဂုဏ်ပြုပွဲ ကို တက်ရောက်သော ဂျပန်ရောက် မြန်မာလူငယ်ကျောင်းသားများအသင်းအဖွဲ့ မှ မောင်နှစ်မများ ( MYSA )
11 Sep, 2020 in Donation by admin
2019/11/6 အိုဆာကာ ကထိန်ပွဲကျေးဇူးတင်လွှာ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 အိုဆာကာ(Ksansai ဒေသ) မြန်မာများနှင့်အတူ MYSA မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ်စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲကို ၃/၁၁/၂၀၁၉ (တနင်္ဂနွေ) နေ့မှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကထိန်အလှူငွေအနေနဲ့ ၅၈၂၀၀၀ယန်း (ငါးဆယ့်ရှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ယန်း) ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကထိန်အလှူတွက် အထွေထွေ အသုံးစရိတ်များ ဖယ်ပြီး အလှူတော်ငွေ ၄၇၀၂၁၀ ယန်းကို ကထိန်အလှူငွေအဖြစ် ဆာတိုးရီဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်သို့ ဆပ်ကပ် ကပ်လှူသွားပါမယ်။ အလှူရှင်များ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကထိန်ပွဲသို့ ကြွရောက်ပေးသော ဆရာတော်များ ဆာတိုးရိဝိဟာ ရ ကျောင်းတိုက်မှ အရှင်မဏိဇော တာလင်္ကာရ၊ မန္တလေးတိုင်းပျော်ဖွယ်မြို့မှဝန်ဆောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဓန္တဉာဏိတ၊ ကျိုတိုမြို့ မှRyugen 様တို့အားလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းရိုသေစွာ […]
ASEAN Festival 2019
11 Sep, 2020 in ASEAN / ASEAN Culture Festival by admin
ASEAN To The World နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ Asean festival ကို 2019/10/27 ရက်နေ့မှာလည်း စဉ်ဆက် မပြတ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ MYSAအဖွဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ #MYSA
· © 2021 Myanmar Youth and Student Association · Powered by · Designed with the Customizr theme ·